-RHCE လက်မှတ်ရ Get ဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
-RHCE ပရိတ်သတ်: သင်ဒါဟာသည် Go သငျ့ပါသနည်း
သင်က-RHCE လက်မှတ်ရဖြစ်လာခြင်းပြီးနောက်လုပျဆောငျပေးနိုငျစှမျးအဘယ်အရာကို Be မလား?
တစ်ဦးက-RHCE (Red Hat Certified Engineer) လက်မှတ်တဦးတည်းအများဆုံးလိုချင်သောနှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှစနစ်များကိုအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်မေတ္တာရပ်ခံသည်။ တစ်ဦးက-RHCE မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဖြစ်ထင်ရှားစွာအကြီးတန်းစနစ်အားအလုပ်အမှုဆောင်တက်လေရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်ကြောင်းအပိုလုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ရှိပြီးသူတစ်ဦး Red Hat Certified System ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး (RHCSA) ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးက-RHCE ကျွမ်းကျင်အခြေခံကျကျ Red Hat အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေတဲ့ Linux ကိုပျံ့နှံ့မှုစနစ်ဖြစ်ကြောင်း Red Hat Enterprise Linux ကိုစနစ်များကိုကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီစနစ်ယခုအခမဲ့ open source ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ-RHCE လက်မှတ်ရရှိမှုအိုင်တီကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်ပြည့်စုံတစ်ကွေ့အချက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်းအံ့သြမရဒီလမ်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအလုပ်အကိုင်ရှုထောငျ့အာမခံနှင့်ပြည့်စုံရာမွငျ့မားလျက်ရှိသည်။ -RHCE ရဖို့, ဆိုတဲ့အချက်ကို၏ကြားမှ RHCSA ပထမဦးဆုံးအာမခံဖြစ်ခြင်းနည်းလမ်းများရရှိနိုင်မည်။ -RHCE certified ရရှိထားပြီးဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
နည်းနည်းလေး Linux ကိုတှေ့ဆုံရှိသည်သောသူကို Windows စနစ်ကအမှုဆောင်အရာရှိ:
Red Hat စနစ်အုပ်ချုပ်ရေးငါ (RH124)
Red Hat စနစ်အုပ်ချုပ်ရေး II ကို (RH134)
Red Hat စနစ်အုပ်ချုပ်ရေး III ကို (RH254)
အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း 1 မှ3န်းကျင်ရှိသည်သော Linux သို့မဟုတ် UNIX တွင်ကြီးကြပ်မှူး:
RHCSA Rapid Track သင်တန်း (RH199)
စာသင်ခန်း, web ပေါ်မှာ, သို့မဟုတ်သင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာမှာ - သင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုအတွက် convient ဖြစ်သည့်မဆိုလေ့ကျင့်ရေး mode ကိုပေါ်အခြေချနိုင်ပါတယ်။ RHCSA လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများနှင့်အခြားဆက်ခံအဆင့်ဆင့်ပေးသူအများအပြားအမြစ်လည်းရှိပါတယ်။
သူများသည် RHCSA သူတို့ရဲ့ခံရသူအဖွစျကိုမောင်းနှင်ရန်စိတ်တွင်အကြီးတန်းအဆင့်စွမ်းရည်စောင့်ရှောက်အဆုံးပန်းတိုင်ကဆည်းပူးချင်ပေလိမ့်မည်သူကိုကျွမ်းကျင်သူများက-RHCE လက်မှတ် fo သွားရမည်အတည်ပြု။ သငျသညျထိုနည်းတူ-RHCE သင်သို့သော်သေးကိုအတည်မပြုရသေးတစ်ခုအောင်မြင်သောအကြီးတန်းစနစ်အားအလုပ်အမှုဆောင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်ရရှိနိုင်မည်ရနိုငျသညျ။ ထို့အပြင်သင်-RHCE Rapid Track သင်တန်းအမှတ်စဥ်သို့မဟုတ်စနစ်အုပ်ချုပ်ရေး I, II, နှင့် III ကိုလက်စသတ်ခဲ့ကြသူတစ်ဦးချင်းစီကိုလက်စသတ်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းပေါ်မှာ။
အဆိုပါ-RHCE လက်မှတ်ပြီးဆုံးရန်သကဲ့သို့, တဦးတည်း Linux ကို 3.5 ၏အမြင်များတွင် 300 နာရီ-RHCE စာမေးပွဲ (EX7) ရှောက်သွားရကြမည်။ တစ်ဦး-RHCE recertify ဖို့လိုအပ်ချက်အတည်ပြုခဲ့သည်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ-RHCE စာမေးပွဲဖြေဆိုတာကိုရှေ့တော်၌ဓာတ်ခွဲခန်း-based စစ်တမ်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်, သင်-RHCE လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးဓာတ်ခွဲခန်း (RH299) သွားဖုံးရမည်။ သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင် ဤသည်နေရာလေးကိုဖွဲ့စည်းပုံမှာသင်ချိုးအတူတကွ Rapid Track သင်တန်းနှင့်တကွ, Red Hat စနစ်အုပ်ချုပ်ရေး, ငါ II နှင့် III ကိုသင်တန်းများမှအဓာတ်ခွဲခန်းများ၏အသီးအသီးမှတဆင့်လုပ်ကိုင်ဖို့ရထားတဲ့အတွက်ဆရာမများကမောင်းတစ်ဦးလေးနေ့ဖြစ်၏။
Red Hat ဖော်ပြသည့်အတိုင်းပထမဦးဆုံးအရေးပါမှုတဲ့ကိစ္စအဖြစ်မဆို-RHCE ကတတ်ကျွမ်းရဖို့သေချာနေတဲ့ RHCSA ၏ကြာသောအရာကိုမယ်။ ကြောင်းသို့ရာတွင်သူတို့အပိုင်းအစ runtime က parameters တွေကိုချမှတ်ရန်စွမ်းရည်အလို ရှိ. , ငြိမ်သင်တန်းများစီစဉ်, ခှဲထုတျ bundle နှင့်လိပ်စာအနက်ကိုစုစည်း; ဖန်တီးဖော်ပြသည့်စနစ်အသုံးပြုမှု၏အကောင့်တစ်ခုပေးသည်; ဝေးလံခေါင်သီသစ်ထုတ်လုပ်ရေးအပါအဝင်ဒီဇိုင်းစနစ်ကသစ်ခုတ်ခြင်း, တစ်ဦး (iSCSI) စတငျစီစဉ်; ဒါကြောင့်ထွက်မှုစနစ်ထောက်ခံမှုဆောင်ရွက်ချက် mechanize နှင့် HTTP / HTTPS ကိုများကဲ့သို့စည်းရုံးရေးအုပ်ချုပ်ရေးပေးရမယ့်စနစ်ကဒီဇိုင်း, FTP, NFS, SMB နှင့် shell ကို scripting နည်းကိုအသုံးချရန်။
ဤအလိုင်းများတလျှောက်တွင်, တဦးတည်း RHCSA-RHCE RHCSA လက်မှတ်အဖြစ်အတည်ပြု RHCSA လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများအပေါငျးတို့သပြီး Red Hat ပစ္စည်းများကိုလုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်စွမ်းရည်အစုံများအတွက်အကြောင်းပြချက်တည်ဆောက်ခြင်းဆီသို့ဦးတည်ညှိနှိုင်းနေကြသည်ရတဲ့မတိုင်မီအာမခံရပါမည်။ -RHCE ကြောက်မက်ဘွယ်အလုပ်အကိုင်အလားအလာရလဒ်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြုအကြံပြုအတည်ပြုရရန်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆိုပါလက်မှတ်ရဖို့ Red Hat အားဖြင့်အထက်ပါရှင်းလင်းပြီးနောက်သင်ယူသင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏ကြားမှ။ သငျသညျ-RHCE လက်မှတ်တစ်ခုစာမေးပွဲတွင်ယူစိတ်တွင်အဆုံးပန်းတိုင်ကသင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တက်ခြေလှမ်းအနည်းငယ်စာမေးပွဲသွားသင့်၏။